Shoelace အတွက်ရောင်စုံ Flat Acetate ရုပ်ရှင်ကိုရောင်းချပါ
Shoelace အတွက်ကွဲပြားသောအရောင်များနှင့်အတူ Acetate ရုပ်ရှင်
၃၂ ဗိုင်းလိပ်တံမြန်အမြန်ကျစ်စက်သည်အဓိကအားဖြင့် RIC-RAC ဇာ၊ ပင့်ကူတုတ်၊ Jacquard တိပ်၊ Elastic Band၊ Fiber Band၊ အမျိုးမျိုးသောကြိုး၊
ဝါယာကြိုးကွက် Gabion Box ကိုရောင်းချရန်
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD ဝါယာကြိုးကွက် Gabion Box ကိုပူသွပ်ရည်စိမ် Gabion ကွက် / ဂဟေ Gabion / Gabion ခြင်းတောင်း Gabion box ကိုနိဒါန်း၌နှစ်ပြီးသော: အကြီးစားဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးခွငျထောကိုလည်း gabion box ကိုခေါ်တော်မူသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့တန်းနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိသံဝါယာကြိုး, မိုးသည်းထန်စွာသွပ် coated ဝါယာကြိုး, စက်အားဖြင့်လိမ်ခြင်းနှင့်ကျစ်သော်လည်း PVC coated ဝါယာကြိုးကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်း: အနိမျ့ကာဗွန်သံမဏိသံဝါယာကြိုး, မိုးသည်းထန်စွာသွပ် coated ဝါယာကြိုး, PVC coated ဝါယာကြိုးက Surface ကုသမှု: ဒါဟာပူ-နှစ်ပြီးသောသွပ်ရည်စိမ်ဖြစ်, သို့မဟုတ် PVC coated နိုငျသညျ, စသည်တို့အမျိုးအစားများ: ဆဋ္ဌဂံ gabion box ကို welded gabion သေတ္တာ
သံမဏိ Frame က Screen ကိုရောင်းချရန်
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိ Frame က Screen ကိုသံမဏိဘောင်မျက်နှာပြင်အများအားဖြင့်သပ်စွဲစေကိရိယာများနှင့်အတူယှေလကျောက် shakers အသုံးချနေကြသည်။ မျက်နှာပြင် frames များကိုမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိစတုရန်းသံမဏိပြွန် Multi-ribbed ဆောက်လုပ်ရေးမှ welded ကြောင်းချမှတ်။ သူတို့ကကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖန်သားပြင်တစ်သံမဏိထောက်ခံမှုပျဉ်မှကပ်လျက်တည်ရှိနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုသံမဏိအလွှာနှင့်အတူတည်ဆောက်နေကြသည်။ Accessary ရော်ဘာပလပ် rips သို့မဟုတ်မျက်ရည်ပြုပြင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အချိန်ကိုခုတ်လှဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရိုက်ထည့် mesh Dimension ၏ 20 250. မှမျက်နှာပြင်မော်ဒယ် Pang (အကျယ် x ကိုတာရှည်) မှအထိကွက်အရွယ်အစားနှင့်အတူသံမဏိဘောင်ဖန်သားပြင်ထောက်ပံ့နိုင် - တစ်ဦးက 20-325 585 × 1165mm အမျိုးအစား - B, 20-325 635 × 1253mm အမျိုးအစား -C 20-325 913 × 650mm အမျိုးအစား - D ကို 20-325 720 × 1220mm အမျိုးအစား - E ကို 20-325 712 × 1180mm
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိယက်ဝါယာကြိုးကွက်သံမဏိယက်ဝါယာကြိုးကွက်ပြားမျက်နှာပြင်, မြဲမြံစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကောင်းသောသမာဓိရှိဆက်ကပ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ကွက်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဖျော်ဖြေရေးအဆောက်အဦနှင့်အခြားအများပိုင်သောအရပ်တို့ကိုမပြ, စက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, ဆောက်လုပ်ရေး, မွေးမြူရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သတ္တုတူးဖော်ရေးခေါင်းပုံဖြတ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ပစ္စည်းများ: စသည်တို့ကို, သံမဏိယက်ဝါယာကြိုးကွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သံမဏိအမျိုးအစား 302,304,304L, 316,316L ၏လုပ်နေကြတယ် stainless 321 နှင့် 430 စွန်ခံအများစုကကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဝါယာကြိုး cloth.T304 အတွက်အသုံးပြုကြသည်အသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေတိကျတဲ့တွင်လည်းအသုံးပြုကြသည် လျှောက်လွှာများ။ အမျိုးအစားများယက်: ရိုးရိုးသို့မဟုတ် Twilled Weave, ရိုးရိုးသို့မဟုတ် Twilled ဒတျချြ Weave, ငါး heddle Weave, ကို Reverse ရိုးရိုးသို့မဟုတ် Twilled ဒတျချြ Weave အဆိုပါယက်လုပ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' တိကျသောလိုအပ်ချက်များသည်, ဝါယာကြိုးအချင်း, အကွက်၏အရွယ်အစားသည်နှင့်အညီဆုံးဖြတ် , width နဲ့အရှည်။
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိဝါယာကြိုးကျနော်တို့ AISI304,304L, 316, 316L ၏ပစ္စည်းအတွက် 5mm မှ 0.018mm ကနေအချင်းနှင့်အတူသံမဏိဒဏ်ငွေဝါယာကြိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ , သံမဏိဝါယာကြိုးများနှင့်သံမဏိမိုက်ခရိုဝါယာကြိုးကျယ်ပြန့်ပျော့ပျောင်းသောပိုက်များအောင်, ဝါယာကြိုးကွက်ယက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး, filter ကိုပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းကရိယာများနှင့်နွေဦးဝါယာကြိုး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အာဖရိကစသည်တို့ကို Applications ကို, ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိတင်ပို့ခဲ့ကြ စသည်တို့ကိုယက်လုပ်ခြင်းနံရံပိတ်ထည်များအတွက်သံမဏိကြိုး, ဝါယာကြိုးအချင်း (မီလီမီတာ) စာနာထောက်ထားရေး (မီလီမီတာ) မက်စ်။ Deviation စာနာထောက်ထားရေး (မီလီမီတာ) 0.020-0.049 + 0,002 / -0,001 0,001 0.050-0.074 0,002 0,002 0.075-0.089 0,002 0,002 0.090-0.109 + 0,003 / -0,002 0,002 0.110-0.169 0,003 0,003 0.170-0.184 0,004 0,004 0.185-0.199 0,004 0,004 0.200- 0,299 0,005 0,005 0.300-0.310 0,006 0,006 0.320-0.499 0,006 0,006
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိဂဟေဝါယာကြိုးကွက်သံမဏိဂဟေဝါယာကြိုးကွက်တချို့ဖောက်သည်များက welded ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ဂဟေကွက်အဖြစ်လူသိများသည်။ ဝါယာကြိုးကွက်ဒီလိုမျိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံအားကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်သံချေး-ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာ welding ပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သွပ်ရည်စိမ်၏နည်းလမ်းနှစ်ခု: ပူပြင်းတဲ့နှစ်ပြီးသော (သွပ်ရည်စိမ်ပူ) & အအေး (လျှပ်စစ်) အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ PVC coated ဝါယာကြိုးကွက်အရည်အသွေးဖန်ဆင်းထားသည် welded ထို့နောက် PVC အမှုန့်သို့မဟုတ် PE အမှုန့်နှင့်အတူ coated မတိုင်မီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်, welded ။ အင်္ကျီအလွှာရှည်လျားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကောင်းသော Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူပင်အားလိုက်နာမှု siveness နှင့်တောက်ပတောက်ပဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်များကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖောက်သည် '' အထူးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ coated နိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်မျိုးပေါင်း: လျှပ်စစ် coated ပူ-နှစ်ပြီးသော PVC အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ width:3'',4'5'6'',7'; ထုပ်ပိုးအခြားအကျယ်, အလျားသတ်မှတ်ချက်ဝယ်မယ့် option ကိုမှာရှိနိုင်ပါသည်။ မီလီမီတာ 1/4 ခုနှစ်တွင်လက်မခုနှစ်တွင်သံမဏိဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ကွက်အရွယ်အစားကြေးနန်း DIA (BWG) သည် specification များစာရင်း "x 1/4" 6.4mm က x 6.4mm 22,23,24 3/8 "x 3/8" 10.6mm က x 10.6mm 19,20,21,22 1/2 "x 1/2" 12.7mm က x 12.7mm 16,17,18,19,20,21,22,23 5/8 "x 5/8" 16mm x ကို 16mm 18,19,20,21, 3/4 "x 3/4" 19.1mm က x 19.1mm 16,17,18,19,20,21 1 "က x 1/2" 25.4mm က x 12.7mm 16,17,18 , 19,20,21 1-1 /2"x 1-1 / 2" 38mm x ကို 38mm 14,15,16,17,18,19 1 "က x 2" 25.4mm က x 50.8mm 14,15,162" x က2"50.8mm က x 50.8mm 12,13,14,15,16
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိက Ultra-ပါးလွှာ mesh သံမဏိက Ultra-ပါးလွှာ mesh ယူနီဖောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောကုမ္ပဏီများနှင့် Ultra-ပါးလွှာယက်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ သံမဏိက Ultra-ပါးလွှာဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်အထူးစွန်ခံအလွိုင်းပစ္စည်းများများ၏အသုံးပြုမှု mesh များနှင့်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းယက်လုပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသေချာမွေးစားအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ယက်လုပ်ခြင်းနည်းပညာအောင်မြင်နေသည်နှင့်ဝါယာကြိုးကွက်၏အထူသည်ခွင့်ပြုသည်းခံစိတ်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် wire ကိုကွက်များ၏တိကျနောက်ထပ်မြင့်မားသောတိပုံနှိပ်လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်တိုးမြှင့်ထားသည်။ ပစ္စည်း: SS304, 304HC, 304L, 316, 316L ။ Weave: ရိုးရိုးရက်လျှောက်လွှာ: စူပါ-ထူးအိမ်သင်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် widly ပစ္စည်းများကာကှယျဖို့အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ က Ultra-ပါးလွှာသံမဏိဝါယာကြိုးကွက်ကွက် / လက်မကြေးနန်း DIA မီလီမီတာ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များစာရင်းတစ်ခု% အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမီတာ) ကွက် / လက်မကြေးနန်း DIA မီလီမီတာဧရိယာတစ်ဦး% အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်ဖွင့်လှစ် w မီလီမီတာဖွင့်လှစ် meshdဧရိယာဖွင့်လှစ် w မီလီမီတာဖွင့်လှစ် meshd/ စတုရန်းမီတာ) 16 0,040 1,547 95% 2,560 120 0,060 0,151 51% 1,250 25 0,025 0,991 87% 6,000 130 0,043 0,152 61% 1,095 32 0,025 0,768 94% 3,840 150 0,050 0,119 50% 0,968 36 0,028 0,677 92% 5,120 150 0,028 0,141 70 % 0,722 42 0,036 0,568 53% 2,880 160 0,043 0,115 53% 0,903 50 0,030 0,478 89% 3,600 160 0,035 0,123 61% 0,810 56 0,040 0,413 83% 2,500 180 0,030 0,111 62% 0,585 63 0,040 0,363 81% 4,320 200 0,036 0,091 51% 0,768 70 0.065 0.297 67% 2,430 200 0,028 0,099 61% 0,447 80 0,063 0,254 64% 1,488 220 0,026 0,089 60% 0,504 80 0,050 0,267 71% 1,290 230 0,030 0,080 53% 0,784 82 0,065 0,244 62% 1,044 250 0,030 0,072 50% 0.576 82 0.053 0.256 69% 1,548 260 0,022 0,076 60% 0,648 90 0,060 0,222 65% 1,217 280 0,025 0,066 53% 0,500 100 0,050 0,196 62% 0,833 300 0,028 0,057 45% 0,320 110 0,060 0,170 55% 1 ။ 131 325 0,025 0,053 46% 0,486
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD ခရုပေါ်ကိုခါးပတ်ခရုပေါ်ကိုခါးပတ်ကုသမှုအပူစားနပ်ရိက္ခာအပြောင်းအလဲနဲ့အနေဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဝါယာကြိုးခါးပတ်ပုံစံများပါဝင်သည်: Balance, ခြံဝင်း, ဒျူပလက်, Chain Driven, မုန့်ဖုတ်တေးဂီတအဖွဲ့များ, စသည်တို့ကိုခရုဝါယာကြိုးခါးပတ်အဓိကပေါ်ကို application များအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ပစ္စည်းစေသည်။ ဝါယာကြိုးပေါ်ကိုခါးပတ်ထားတဲ့ရပ်တည်ချက်လေထုနှင့်ဓာတုနှစ်ဦးစလုံးချေးနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်မီးဖိုအပူချိန်ကုသအပူခုခံတွန်းလှန်လိမ့်မည်သည့်မဆိုအလွိုင်း၏လိမ့်မည်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ညစ်ညမ်းမှုမဆိုအန္တရာယ်ပပျောက်ရေး, သံမဏိဝါယာကြိုးခါးပတ်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်: စားနပ်ရိက္ခာစက်မှုလက်မှု - စသည်တို့ကိုအပူကုသမှု bottling Conveying, အဝတ်လျှော်, blanching, ခြောက်သွေ့, ကြော်, အေးခဲနေသော, မုန့်ဖုတ်, အအေး, ထုပ်, ပိုး, စည်သွပ်ဗူး, - Brazing, bluing, hardening, အဝတ်လျှော်, degreasing, Pickled, sintering, သတ်, ကြွေစသည်တို့ကိုကြွေထည်နဲ့ Glass ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း, drawing, tempering, လက်မဆေး - Annealing, အလှပြင်ဆင်ရေး, sanding စသည်တို့ကို
projectile လမ်းခွဲရောင်း gripper D2 JW-s022-080410
Xi'an JW သွင်းကုန် & Export ကို CO ။ , LTD မှ 2006 ခုနှစ်တွင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, တရုတ်အတွက်စက်ယန္တရားအစိတ်အပိုင်းများယက်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်ကျော် 10 နှစ်ပို့ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါ။ projectile စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖိနပ်, projectile ခန္ဓာကိုယ်, projectile grippers, ခရိုနီကောက်နေ, ဘရိတ်နံရံ, projectile လမ်းခွဲ, projectile Return, ကောက်နေ, သွားလမ်းညွှန် 1. အောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် .. အသေးစိတ် projectile ရက်ကန်းစင်, rapier ရက်ကန်းစင်များနှင့် airjet ရက်ကန်းစင်မှုအတွက်ထိုက်မတန်များမှာ ဖောက်အဆုံး gripper ကတ်ကြေး, ရထားလမ်းကိုလမ်းညွှန်, လမ်းပြရထားလမ်းကောက်နေ, link ကိုကောက်နေ ... စသည်တို့ Sulzer မှ PU, TW11, P7100, P7150, P7200 များအတွက်လျောက်ပတ်, P7300 နေရာယူထားနိုင်သေးသည်။ 2. Rapier စက်အစိတ်အပိုင်းများ: Picanol GTM, GTM-AS, Gamma, Dornier HTV, PTV, GTV, Somet SM92, SM93, Thema11, Thema 11E, Vamatex C401, P401, P1001 အဘို့သင့်လျော် rapier grippers, rapier တိပ်, ဘီးမောင်း, ခုတ် ဒါကြောင့်အပေါ် K88, လီယိုနာဒို, ငွေ, Nuovo Pignone Smit TP300, TP400, TP500, TP600, အစာရှောင်ခြင်း, GS900 / 6200/6300 Sulzer G6100, F2001 နှင့်။ 3. Air ကို-ဂျက်စက်အစိတ်အပိုင်းများ: nozzle, solenoid ဆို့ရှင်, ဖောက် detectors အ, ဓါးသွား, cams, Picanol Pat, Picanol Omni / မြစ်ဝကျွန်းပေါ်, Omni-ပေါင်း, Tsudakoma ZA200, ZA203 / 205/209, ZAX တိုယိုတာ 500.600.610.710 အဘို့လျောက်ပတ် cam လီဗာ။ နေရာယူထားနိုင်သေးသည်။ , တောင်ဘက်အမေရိက, အာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့ဥရောပကနေဖောက်သည်ရှိသည်, မြောက်ဘက်အမေရိကတိုက်။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှစ်စဉ်တိုးမြှင့်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website scan နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။